बादलले गरे यस्तो तयारी : उनको गुटमा को–को जाँदैछन् ? « Ok Janata Newsportal
बादलले गरे यस्तो तयारी : उनको गुटमा को–को जाँदैछन् ?
काठमाडौं । नेकपा (ओली पक्ष)मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ समानान्तर कमिटी बिस्तार गर्न सक्रिय भएको रहस्य खुलेको छ ।
पार्टीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दबाउन थालेसँगै बादल आफ्नो पक्षको कमिटी बिस्तारमा सक्रिय भएका हुन् । यसअघिको युवा संघको नेतृत्व ओली गुटले कब्जा गरेपछि बादल गुटले कार्यक्रम नै बहिस्कार गरेको थियो ।
आफू कमजोर महसुश गर्दै गएका बादलले स्थानीयस्तरसम्म नै समानान्तर कमिटी बिस्तारको अवधारणा अघि सारेका छन् । बादलको गुटमा ओलीबाट प्रताडित बनेका नेताहरु समेटिएका छन् ।
बादल गुटका उनी समर्थक नेताहरु पनि प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास नमान्न भनिरहेका छन् । नेकपामा शक्ति सन्तुलनका कारण यसअघि ओली र दाहालबीच टकराव शुरु भएको थियो । दुवै जनाको आआफ्नै इगोका कारण अहिले नेकपा विभाजित अवस्थामा छ ।
नेकपा विभाजन भएसँगै विभिन्न नेता कार्यकर्ता पनि विभाजित भएका छन् । उनीहरु आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्दै बाटो खोजिरहेका छन् ।
७१ वर्षे कम्युनिष्टको इतिहासमा बहुमत पाएको नेकपाले आफ्नो साख जोगाउन नसक्दा जनता सामू जान समेत समस्या छ । संविधानमा अधिकार नभएको व्यवस्थामा टेकेर प्रधानमन्त्री ओली तानाशाही बन्न खोजेको भन्दै दाहाल–नेपाल पक्ष सडकमा छ भने, ओलीले निर्वाचनको लागि तयारी हुन भन्दै सत्ता लम्ब्याइरहेको छ ।
यतिबेला नेकपाको आधिकारिताबारे सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधीन छ ।